Ahoana no hanatsarana ny tranokalan'ny SEO amin'ny alàlan'ny backlinks blog?
Misy manam-pahaizana momba ny SEO sy webmasters sasany milaza fa ny bilaogin'ny vahiny dia tsy manan-danja kokoa amin'ny fampiroboroboana ara-barotra ary heverina ho toy ny fitaovan'ny fikarohana toy ny teknika fananganana spammy. Kanefa, mila mino an'izany ve isika? Na eo aza ny porofo fa mifanohitra amin'izany, mbola misy angano maro momba ny bilaogy vahiny, indrindra raha ampiasaina ho tetikady fitambaran-tranonkala.
Maro ny fanaporofoan-kevitra izay mampiseho antsika fa ny SEO eo anivon'ny blôgy dia tena mahasoa indrindra rehefa ampiasaina tsara. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba ahafahanao mampiasa lahatsoratra manandanja mba hanamboarana laza, fahefana, ary fampisehoana amin'ny backlinks SEO ao amin'ny bolongana.
Ny angano momba ny bilaogy vahiny
Maro ireo manam-pahaizana izay mieritreritra fa lasa adala loatra ny bilaogy vahiny mba hanorenana rohy. Tsy tian'izy ireo hiantehitra amin'ny famoahana ny vahiny ary handà ny hanomezana ny blaogin'ny vahiny SEO tahaka izao.
Raha tompon'ny blôgy ianao, dia mety nahazo mailaka imbetsaka tamin'ny zero manokana na fikasana hamoronana votoaty tsara. Misy tranonkala sasany ao amin'ny antoko fahatelo mandefa anao hametraka rohy dofollow ao amin'ny vondrona lahatsoratra. Avy amin'ny fomba fijerin'i Google, azonao jerena ny fomba ahafahan'ireo rohy ireo fanamby ho an'ny sehatra misy anao. Ny votoatiny dia ambany kalitao, tsy fahampian'ny vaovao miorina amin'ny fikarohana, ary tsy misy ifandraisany amin'ny mpanoratra marina. Ny habetsaky ny backlinks avy amin'ny votoaty toy izany dia mitarika loharanom-tranonkala mahatsikaiky.
Na izany aza, amin'ity tranga ity dia mamaritra spam iray aho. Azonao atao ny mamantatra io karazana spam io amin'ny fijerinao voalohany. Fa raha mba miresaka momba ny tsipika mipetaka amin'ny tsipika, izay ahitana ny votoaty sy ny fikarohana. Manana vintana ianao hamantatra ity karazana spam ity.
Google dia mampifantoka ny tetika telo manaraka izay nanodikodinam-bola indrindra:
Mametraka rohy fampiroboroboana amin'ny tranokalanao;
Ireo lahatsoratra dia nosoratan'ireo mpanoratra izay tsy manana traikefa amin'ny sehatra manokana ary manoratra momba ireo lohahevitra izay tsy henony akory;
Ampiasao ny votoatiny manerana ny lahatsoratra rehetra, mamorona duplications.
Olana mahazatra eo anivon'ireo tompona tranokala handraisana lahatsoratra tsy mahomby izay tsy mahomby ao anaty sehatra. Izy ireo dia angatahana mba hanoratra ny lanjan'ny lahatsoratra iray ihany ary hanaparitaka azy toy ny hafatra voarainy. Mampisy heviny momba ny fandefasana entana izy io fa asa fitadiavana.
Na dia manakarama mpanoratra iray izay mahatakatra zavatra iray aza ianao dia hahazo valiny hafa. Amin'ny ankapobeny dia hita amin'ny fijery voalohany fa mendrika ny hahazo rohy io votoaty io.
Noho izany, raha te hahazo tombony amin'ny sehatra backlinks SEO ianao dia mila mizara ny fianarana, ny mpikaroka ara-barotra, ny fomba ampiasainao amin'ny asanao sy ny toro-lalana izay hanana tombony ho an'ny mpamaky anao. Farany dia hitondra vokatra mahavariana momba ny fialan-tsasatra sy ny fahafaham-po ny mpamaky Source .